တားျမစ္​ဘာသာ​ေရးလြပ္​လပ္​ခြင္​့ — Steemkr
ကမျြးစာအုပျမြားများရောင်းချမှု၏တားမြစ်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်များအတွက်ပိုမိုဆိုးရွားလာပြည်နယ်သရုပ်ပြသိသာထင်ရှားစွာပင်စိုးရိမ်စရာပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက - ဝီလျံ Nee, နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့မှာတရုတ်သုတေသီဗာတီကန် "ဖြစ်ကောင်းသူတို့ရဲ့တရုတ် counterparts တွေကိုနှင့်အတူ၎င်း၏ဆွေးနွေးမှုများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ဤပြဿနာကိုယူသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ် တရုတ်နိုင်ငံတွင်။ "
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနမှာတော့ကျနော်တို့ကတရုတ်အာဏာပိုင်များကို ပို. ပို. ဘာသာတရားကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ယုံကြည်သူများအပြစ်ပေးဖို့ကပိုမြင့်မားတဲ့နည်းပညာနည်းစနစ်များ အသုံးပြု. တွေ့ရှိခဲ့ - ။
ယုံကြည်သူများ၏စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဖမ်းဆီးခြင်းအပါအဝင်အွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်များမျှဝေခြင်းအတွက်" တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာ, အစ္စလာမ်ဘာသာ, ကက်သလစ်, ပရိုနှင့် Taoism - - ထိုသို့သောတရုတ်မျိုးချစ်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းသို့မဟုတ်တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာအစည်းအရုံးအဖြစ်တရားဝင်ရုံးသုံးအဖွဲ့အစည်းများကကြီးကြပ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်တင်းကျပ်စွာငါးအသိအမှတ်ပြုဘာသာတရားနှင့်အတူအစိုးရအနေဖြင့်ထိန်းချုပ်နေပါတယ်။ သာသနာရေးများအတွက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေး (Sara) ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတရုတ်နိုင်ငံတွင်ခရစ်ယာန်ဘာသာအပေါ်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကငါးနှစ်အစီအစဉ်အရ, "လွတ်လပ်ရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှု၏နိယာမ" ကိုထိန်းသိမ်းထားမှု "ဟုတရုတ်လူမျိုး၏အရှက်သမိုင်း" ရန်အရေးကြီးပါသည်နှင့် ၏တန်ခိုးအားဖြင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အသုံးပြုမှုကို "ကိုလိုနီစနစ်နှင့်နယ်ချဲ့ဝါဒ။ " တရုတ်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်ဆက်ဆံရေး 1951 ခုနှစ်တွင်ဖြိုဖျက်ပြီးကတည်းကဘေဂျင်းနှင့်ဗာတီကန်အကြားအဓိကအဓိကအတားအဆီးဖြစ်သည့်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကခန့်အပ်ထားသောကြသည်မဟုတ်။ တိုးတက်မှုကိုအချို့သောတရုတ်အရာရှိများသည်သန့်ရှင်းသောကြည့်ရှုနှင့်အတူတစ်ဦးသဘောတူညီချက်အီစတာကျော်ရာအရပ်ကိုယူနိုင်ကြောင်း, သို့သော်ဤအထဲကဝေ့မပြုခဲ့ဟုအတူမကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်ကြပြီမှပေါ်လာခဲ့ချေ။
ဘာသာရေးကြီးကြပ် လေ့လာသုံးသပ်သူများကတရုတ်သည်လက်ရှိတွင်အဓိကကအုပ်ချုပ်ပုံပြောင်းကုန်ပြီနှင့်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများဘာသာတရားကိုလျှက်ကပြောသည်။ ညီညွတ်သောတပ်ဦးလုပ်ငန်းခွင်ဌာန, ပင်လယ်ရပ်ခြားတရုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအားထုတ်မှုကြီးကြပ်သောအာဏာရကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ယခင်နေရာ၌ဦးစီးဌာန, မကြာသေးမီကထပ်မံလူ့အဖွဲ့အစည်းကျော်ပါတီရဲ့အကြွင်းမဲ့အာဏာထိန်းချုပ်အားပေးတိုင်းရင်းသားနှင့်ဘာသာရေးရေးရာတာဝန်လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။ ယခုအပတ်ထုတ်ဝေဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်အသစ်တစ်ခုကိုအစိုးရအဖြူရောင်စက္ကူ, အဆိုအရဘာသာတရား "ဟုအဆိုပါဆိုရှယ်လစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။ " ရမယ် "ဘာသာရေးယုံကြည်သူများနှင့် Non-ယုံကြည်သူများအချင်းချင်းလေးစားနှင့်အညီအသက်ရှင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မီဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ကျူးလွန်များနှင့်အမျိုးသားရေးပြန်လည်နုပျိုခြင်းတရုတ်အိပ်မက်များ၏သဘောပေါက်ဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်" ဟုစက္ကူအရာရှိတဦးကကွန်မြူနစ်ပါတီစာရင်းကလည်း, မူဝါဒများ။ "ပိုပြီးတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဘာသာတရားကိုထိန်းချုပ်ဖို့သမ္မတ Xi Jinping အောက်မှာကျယ်ပြန့်လမ်းကြောင်းသစ်, အထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာ (ရှိပါသည်)," လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့ Nee ကဆိုသည်။ "ဒါဟာအစိုးရကသူတို့ကမျြးစာအုပျမြားများရောင်းချမှုကိုပိတ်ပင်တားမြစ်နေတစ်ချိန်တည်းမှာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်မလုပ်ပဲကြောင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ပါပဲ။ " အားထုတ်မှုဟာ Sara ငါးနှစ်တွင်အစီအစဉ်အရသိရသည်တစ်ဦးထက်ပို "Sinicized" စာသားကိုနှင့်တကွ, တရုတ်ကမျြးစာ၏ဗားရှင်းသစ်ထုတ်လုပ်ရန်ဆဲဖြစ်ကြသည်။ "သမ္မာကျမ်းစာရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အရာရှိတဦးကပြန်လည်ထုတ်ဝေဖို့စီစဉ်ထားအားထုတ်မှုများ၏ဖယ်ရှားခံ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတက်ကြွစွာကျနော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာ, တိဘကျဗုဒ္ဓဘာသာများအတွက်ဖူးကြောင်းဘာသာရေးကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. အနက်ကိုဘော်ပြဖို့ဘုရားမဲ့ဝါဒီ (ကွန်မြူနစ်ပါတီ) ကကျယ်ပြန့်အားထုတ်မှုနှင့်အတူ fit နှင့်မှမယ်လို့ ယနေ့အထိအငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာ, ခရစ်ယာန်ဘာသာ, "ကွတ်ကပြောပါတယ်။